डोनाल्ड ट्रम्पलाई विश्वभरबाट महिलाको योनी उपहार
गुल्मी कांग्रेस महिलाहरु विकृति विरुद्धको अभियानमा
गुल्मी कांग्रेसको महिला हिंसा तथा जाँडरक्सी नियन्त्रण अभियान
संघीयता सफल भए देशकै अस्तित्व समाप्त हुन्छः राजमो अध्यक्ष, केसी
एमालेले २४१ जना केन्द्रीय सदस्यको नामावली टुंगो लगायो, को को परे ? (नामसहित)
एमालेको तर्फबाट ४५ सदस्यहरुको नाम टुंगो लाग्यो, को को परे ? (सुचिसहित)
मुटु अस्पताल बटुवलद्धारा गुल्मीका सयौंको निशुल्क उपचार
बिपी प्रतिष्ठानमा सेवाग्राहीलाई सास्ती
मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण प्रस्ताव स्वीकृत, राष्ट्रपतिले संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्ने
सर्लाहीमा बिजुली चोरी गर्ने ४ सय घरको लाइन काटियो
सर्लाहीमा ससुराली पक्षको कुटाइबाट एक महिला गम्भीर घाइते
गुल्मी यातायातले संस्थाबाट व्यक्तिका नाममा करोडौं रकम निकालेको खुलासा
पोखरामा मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाइने
आज विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्यो, कुन देशको कति ? (सुचिसहित)
मापदण्ड विपरित धमाधम सडक निर्माण
नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रो निर्माणका लागि ग्लोबल टेण्डर
बानियाँको ‘काली–काली कान्छी’ सार्वजनिक
चर्चित सल्यानी गायक भरत परियारले ल्याए ‘तिम्रै तस्विर आँखैमा झलल’ (भिडियोसहित)
परदेशीको पीडालाई समेटीएको अहिलेसम्मकै मार्मिक गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)
करोड क्लवमा कार्टुन्ज क्रुका सरोज ओलीलाई ह्याट्रिक (भिडियोसहित)
मोदी भ्रमणको गम्भीर भूल: प्रदेश २ लाई सिधा सहयोग गर्न मिल्छ ?
सुन तस्कर आरोपीको पक्षमा ८० वकिल ! तिनका अगाडी सरकारी वकिल त्यसै गल्छन्
राजधानीमै यस्तो छ भने कसरी पुग्ला र तिम्रो सिंहदरवार गाउँगाउँमा ?
अब म तस्कर कहलाईसकें, एसएसपी होइन
Posted on: 28 Dec, 2016
पुस १३, काठमाडौँ | अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको पूर्वसन्ध्यामा डोनाल्ड ट्रम्पको ‘महिलाको यौनांगमा समाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण निकै विवादमा तानिए । सोही अभिव्यक्तिका कारण उनले चुनाव हार्ने आँकलन पनि गरियो । तर सबै अनुमानलाई गलत सावित गर्दै उनले चुनाव जिते ।
राष्ट्रपतिको रुपमा ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका डोनाल्ड ट्रम्पले अनौठो उपहार प्राप्त गर्दैछन् । विश्वभरका मानिसहरुले ट्रम्पलाई अब योनी उपहार पठाउन सक्नेछन् ।
अमेरिकाको एक समलिंगी स्कुलका जोडी जुल्स र गेबले सेन्ड ट्रम्प पुस्सी नामक गैरनाफामूलक वेबसाइट खोलेका छन्, जसबाट विश्वका जोसुकै मानिसले सिधै ट्रम्पलाई योनी उपहार पठाउन सक्नेछन् ।
वास्तवमा त्यो महिला यौनांगको आकार तथा रंगसँग ठ्याक्कै मिल्ने ललिपप हुनेछ । उक्त वेबसाइटलाई ३ दशमलव ९९ डलर तिरेर अर्डर गरेपछि गेब र जुल्सले सिधै ती योनीस्वरुपका ललिपपहरु न्युयोर्कस्थित ट्रम्पको मुख्यालयमा पठाइदिनेछन् ।
ट्रम्पलाई यौनांग उपहार पठाउने यो अभियानको एउटा उद्देश्य छ । यसमार्फत उनीहरु अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको परिणामबाट असन्तुष्ट हुने धेरै मानिसहरु छन् भन्ने कुरा ट्रम्पलाई जानकारी गराउन चाहन्छन् । उक्त वेबसाइटमा लेखिएको छ- हामी अमेरिका र ट्रम्पबाट असन्तुष्ट छौँ । समावेशी र महिलाविरोधी नहुने अमेरिकाप्रतिको हाम्रो चाहना कायमै छ भन्ने कुरा ट्रम्पलाई योनी आकारका ललिपप पठाएर व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।
महिलाका मुद्दाहरुमा ट्रम्पको रवैयाप्रति वेबसाइटमा आलोचना गर्दै उनलाई ‘महिला विरोधी सुँगुर’ भनिएको छ । साथै उनले अश्लील पर्खाल खडा गर्न थालेको र उनी पुरुषवादी, जातिवादी रहेको पनि आरोप लगाइएको छ ।
साउदी अरबमा २४ जुनदेखि महिलाहरुको हितमा नयाँ फैसला
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भ्रष्टाचारको आरोप
विमान दुर्घटना हुँदा सयभन्दा बढीको मृत्यु, तीनको उद्दार